စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN update#3 | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN update#3
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း Choi-wan သည် မြောက်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိလာလျှင် သမုဒ္ဒရာ ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန်ကျဆင်းလာမှုကြောင့် အင်အားလျော့လာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းပြီးဖြစ်ရာ မြောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာသို့ ဝင်ရောက်မည့် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက် (စနေနေ့)နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် တဖြည်းဖြည်းအင်အားလျော့ကျလာနိုင်ကြောင်း ထပ်မံအတည်ပြုထုတ်ပြန်ချက်များကို တွေ့ရပါသည်။
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန်ဖြင့် ၆ နာရီခွဲအချိန် TSR ထုတ်ပြန်ချက်အရ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်-၅ CAT-5 မှ အဆင့်-၄ CAT-4 သို့ လျော့ကျသွားကြောင်း သိရပါသည်။ လာမည့် ၄၈ နာရီနောက်ပိုင်း စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် အင်အား အဆင့်-၃ မှထပ်မံအားလျော့သွားပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် နံနက် တွင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားနိုင်ကြောင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
Super Typhoon ChoiWan ၏ မုန်တိုင်းမျက်စေ့သည် ယခုအချိန်ထိ ထင်ရှားစွာတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပြီး ၄၁ ပေ မြင့်သည့် မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းများသည် Iwo To နှင့် Chichi Jima ကျွန်းများတစ်လျောက်ကျရောက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်ကြောင်း သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
Reference Information from Typhoon 2000 update#14
Time/Date: 6:00 AM PST Thu September 17 2009
Location of Eye: 20.1 N Lat 141.1 E Lon
Distance 1: 525 km (283 nm) South of Iwo To
Distance 2: 635 km (345 nm) East of P.A.R.
Distance 3: 710 km (383 nm) South of Chichi Jima
Distance 4: 1,990 km (1,075 nm) East of Batanes, PH
Saffir-Simpson Scale: Category 5
Central Pressure: 918 millibars (hPa)
General Direction: Iwo To-Chichi Jima Islands
Max Sea Wave Height (near center): 41 ft (12.4 m)
NWS-Guam TrackMap (for Public):7AM PST Thu Sep 17
JTWC Ship Avoidance TrackMap: 18Z Wed Sep 16
Multi-Agency Forecast TrackMap:2AM Thu Sep 17
+ Forecast Outlook: CHOI-WAN is expected to continue moving NW to NNW within the next 12 to 24 hours. The2to 5-day Long-Range Forecast shows the howler recurving Northward to NNE-ward, passing about 135 km to the west of Iwo To tomorrow aftermoon Sep 18 and about 130 km to the west of Chichi Jima on early Saturday morning, Sep 19. CHOI-WAN shall start to weaken as it accelerates further to the NE acrossaslightly cooler Northwestern Pacific Ocean, just south of Kuril Islands and shall become Extratropical by early Tuesday morning Sep 22.+ Effects: CHOI-WAN’s dangerous main core (eye & eyewall) remains over warm open seas…with its outer bands now spreading across Iwo To…and across Chichi Jima later today. 1-day rainfall accumulations of 50 up to 250 mm can be expected along CHOI-WAN’s rainbands…with isolated accumulations of up to 400 mm near the center of CHOI-WAN or along its Eyewall. Possible coastal Storm Surge flooding of more than 18 feet above normal tide levels…accompanied by large and dangerous battering waves…is possible along the coastal areas of Iwo To and Chichi Jima. Catastrophic damage is likely on this type of storm surge.
« စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN update#2
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ချဉ်းကပ်လာနေသော Super Typhoon Choi-Wan »